Fanontaniana Roa Tsy Voavalin’ireo Mpino ny Evolisiona
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luvale Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Ourdou Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
Fanontaniana Roa Tokony Hodinihina
1 Ahoana no Niandohan’ny Fiainana?
Tsy tena afaka milaza ny manam-pahaizana hoe hoatran’ny ahoana ny teto an-tany, an’arivony tapitrisa taona tany aloha tany. Tombantombana fotsiny no azon’izy ireo atao. Tsy mitovy hevitra koa ry zareo hoe taiza no niandohan’ny fiainana. Misy, ohatra, milaza hoe tany anaty volkano, na koa hoe tany ambanin’ny ranomasina. Misy aza mihevitra fa zavatra avy tany ambony tsy taka-maso tany no nipitika tetỳ an-tany, ary iny no niandohan’ny zavamananaina. Izany anefa tsy mamaly an’ilay fanontaniana hoe ahoana no nampisy ny fiainana, fa milaza fotsiny hoe tsy avy eto an-tany ilay izy fa avy any an-toeran-kafa.
Miavaka ny sela ao amin’ny zavamananaina satria afaka mitahiry fanazavana. Mombamomba an’ilay zavamananaina io fanazavana io, ary ao amin’ny fototarazo no misy azy. Hain’ny sela ny mitatitra sy mandika ary manatanteraka ny toromarika ao amin’ireny fanazavana ireny. Oharin’ny mpahay siansa sasany amin’ny ordinatera ny sela, ka ny fototarazo no programa ao anatiny. Raha nisy ho azy teo àry ny sela, dia tsy voazava mihitsy hoe avy aiza ny fanazavana voarakitra ao anatin’ny fototarazo.
2 Ahoana no Nampisy An’ireo Zavamananaina Be dia Be?
Hitan’ny mpahay siansa izao fa tsy hiova ho karazam-biby hafa ny biby iray, raha tsy ny molekiola ao amin’ny selany mihitsy no miova. Ny niandohan’ny sela heverina fa “tsotra” indrindra aza anefa tsy hain’ny evolisiona ny manazava azy. Koa mainka moa fa ny nampisy an’ireo karazam-biby be dia be eto an-tany! Mitombina ve hoe kisendrasendra fotsiny izy ireny? Hoy i Michael Behe, mpampianatra siansa momba ny zavamananaina: ‘Rehefa nandalina momba ny biby ny mpikaroka, dia tsy nampoizin’izy ireo hoe tena sarotra sady be tsipiriany be ny firafitr’izy ireny. Tsy azon’izy ireo mihitsy hoe ahoana no nampisy azy ireny, raha ohatra ka kisendrasendra fotsiny izany.’
Janoary 2015 | Ahoana no Nampisy ny Fiainana?
MIFOHAZA! Janoary 2015 | Ahoana no Nampisy ny Fiainana?